Uphando kunye nophuhliso | Brocade Smart Space Technology Co., Ltd. zitshintshi
IZiko loPhando loShishinoIqela lisebenzisana nophando lwasekhaya nolwamanye amazwe kunye namaziko ophuhliso kubandakanya neYunivesithi yaseStanford, iYunivesithi yaseTsinghua, iYunivesithi yasePeking, iYunivesithi yesiqhelo yaseSichuan, iLebhu yeSayensi yezoBunjineli yeSoftware eNkulu yeNkqubo, iBeijing Financial Technology Research Institute, iLebhu yaseShenzhen Pengcheng, njl. Eli qela lasungula iZiko loPhando ngeDatha eliKhulu laseYunjin njengeziko lalo lokwenza uphando.
UZhu Jie, CTO weSmart Space
Waphumelela kwiYunivesithi yaseHubei eqhelekileyo, eyona nto iphambili kubunjineli bolwazi ngobuchwephesha. Usebenze kwiinkampani ezininzi ezaziwayo ezidwelisiweyo, egxile kwishishini lokubonwayo lokubonwayo kunye nokubonakalayo ngaphezulu kweminyaka elishumi. Kwangelo xesha, wabonelela ngeenkonzo zezixhobo zobuchwephesha kwi-Shenzhen Universiade. Okwangoku, unamalungelo awodwa omenzi wechiza kunye neemveliso ezintsha ezinelungelo elilodwa lomenzi.
UNjingalwazi uSun Jiaguang, isuphavayiza yobugqirha, ngumfundi kwiziko lobunjineli laseTshayina, umlawuli weZiko eliKhulu leDatha kwiYunivesithi yaseTsinghua kunye nomphathi weLebhu yeLizwe yezoBunjineli kwiNkqubo enkulu yeDatha. Wayekade elisekela mlawuli weSiseko seSizwe seSayensi yezeNdalo eChina kunye nomphathi weSikolo soLwazi kwiYunivesithi yaseTsinghua. Ilungu leKomiti yeziGanga zezeMfundo kunye neQela loVavanyo leBhunga likaRhulumente, uMlawuli weSicelo seNkxaso kuLwazi lweShishini leSoftware kwiZiko loPhando lobuGcisa, kunye noSihlalo weChina Engineering Graphics Society
UNjingalwazi Yang Shiqiang, umphathi wobugqirha, unobhala weKomiti yeQela leLabhoratri yaseShenzhen Pengcheng. Usebenze njengoNobhala weKomiti yeQela kunye noMlawuli weKomiti yezeMfundo yeSebe leKhompyutha leYunivesithi yaseTsinghua
UGqirha Zhao Yong, Ingcali yeDatha eNkulu kunye neNgcali yeBlockchain, uMyili oyiNtloko
Waphumelela kwiYunivesithi yaseBeijing yesiqhelo (iBachelor), iYunivesithi yaseTsinghua (Master) kunye neDyunivesithi yaseChicago (PhD). Utitshala wakhe nguNjingalwazi uLan Foster, utata weAmerican Grid, kwaye ukwangumfundi weAmerican ACM. Upapashe imisebenzi yokuguqulela eyi-14 kwaye wapapasha phantse amaphepha angama-70 kwiijenali zamanye amazwe.
Uyingcali enkulu yedatha ye-Chinese Computer Society kunye nomphandi we-Asia Blockchain Industry Institute. Usebenze kwiinkampani ezaziwayo zamanye amazwe nezasekhaya ezinje nge-IBM Global Research Centre, China Telecom neMicrosoft.
I-CTO yeYunjin Smart Technology
Itekhnoloji yenyani eyiyo kunye nengcali yetekhnoloji yamawele edijithali
Umcebisi okhethekileyo weKomiti yeNgcali yeZiko loLawulo lweNene leNkonzo yoMphathiswa Wezemveliso kunye neTekhnoloji yoLwazi